तेस्रो आँखा विशेष – Page9– Tesro Ankha
चस्माले अपराधी पत्ता लगाउँछ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, विश्वास गर्न कर लागेको छ । चीनमा निर्मित चस्माले अपराधी समातेपछि विश्वास नगरी सुखै छैन । चीन सरकारले अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउने चस्मा बाँड्न थालेको छ । सोे चस्मा लगाएका चिनियाँ प्रहरीले अपराधी समात्न सफल भएको बताइएको छ । चीनको झियाङ्सु प्रान्तको सेन्ट्रल रेल स्टेसनमा कार्यरत केही प्रहरीलाई हाइटेक चस्मा ब...
पहिचानजनित खोज पत्रकारिता
कुमार यात्रु थालनी कुरा समग्र नेपाली पत्रकारितामा खोज पत्रकारिताको अभ्यास नौलो हो । अझ पहिचानजनित पत्रकारितामा त यसको थालनी नै हुन सकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसो त पहिचानजनित पत्रकारिता नै नेपाली परिवेशमा स्थापित हुन सकेको छैन । पछिल्लो कालखण्डमा आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज र परिवर्तित रूपमा फोनिज) को स्थापना र यसका गतिविधिबाट केही सकारात्मक परिणाम देखिए पनि नेपाली पत्रकारितामा स...
सुदर्शन अधिकारी अध्ययन र अध्यापनका लागि पाठ्यक्रमको महत्व विशेष रहन्छ । विभिन्न तहका पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्र समेटेर पाठ्यक्रम समावेश गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पटक–पटक छलफल संवाद र गोष्ठीहरू पनि हुने गरेका छन् । वर्तमान पाठ्यक्रम उपयोगी र व्यावहारिक भएन भन्ने आवाज सामान्य व्यक्तिदेखि शिक्षाविद्सम्मले उठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रमअनुसा...
नेपालको पहिलो बस्ती
पुष्पलाल मञ्जुश्रीको आगमनपहिले काठमाडौं उपत्यका ताल हुनाले उनीभन्दा पहिले त्यहाँ बस्ती असम्भव थियो भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । यो कुरा साँच्चै जस्तो भए पनि वास्तवमा साँचो होइन । मञ्जुश्री नेपाल आउँदा केरुङ पार गरी नुवाकोटको बाटो हुँदै आएको बोध हुन्छ । नुवाकोटमा उनको पादुका अद्यापि सुरक्षित छ । यो पादुका सरस्वतीस्थान काठमाडौंको भन्दा पुरानो हो भनी श्री सत्यमोहन जोशीले ‘नेपाल लोकसंस्कृति’...
राजनीतिका उज्याला र अँध्यारा दुवै पाटा छन् । नेपाली राजनीतिका अनेकौं अप्ठ्यारा घुम्ती र मोडका कारण आममान्छेका लागि राजनीति उतिधेरै प्रिय बनिसकेको छैन । नेपाली राजनीतिज्ञहरूप्रति आममान्छे त्यतिधेरै आशावादी बन्न सकिरहेका छैनन् । राजनीति र राजनीतिज्ञहरूले आशाभन्दा बढी निराशा जन्माइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा औंलामा गन्न सकिने ती थोरैमात्रै नेताहरू छन्, जोप्रति नेपाली आशावादी छन्, उनीहरूलाई आममान्छ...
तेस्रो आँखा संवाददाता कवि बुद्धिसागरलाई नपढ्ने, नचिन्ने कमै होलान् । युवापुस्ताका चर्चित कविले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका स्टाटस त्यत्तिकै पठनीय, व्यावहारिक र मन छुने हुन्छन् । तपसिलका ३० भनाइ कवि बुद्धिसागर फेसबुकबाट संकलन गरिएको हो । –सम्पादक (१) मुस्कान अनुवाद नचाहिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो । (२) धेरै टाढा नजानू । एकान्तमा एक्लो हुँदा खिस्स निस्केको मुस्कानमा खोज्नू मलाई । ...
मेसिनबाट कोठामै उत्पादन गर्न सकिने घाँस
कृष्ण न्यौपाने विश्वका अधिकांश देशमा आधुनिक प्रविधिबाट ठुल्ठूला कृषि क्रान्ति गरिएका छन् । विश्वको बढ्दो जनसंख्याले गर्दा कमभन्दा कम जमिनबाट अधिकतम लाभ लिन सकिने प्रविधि प्रयोग युरोप, अमेरिका, अफ्रिकालगायत एसियाका केही देशमा उन्नत कृषि तथा पशुपालन गर्न थालिएको छ । नेपालकोे अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन गर्न राज्यको ध्यान जानु जरुरी भइसकेको ...
दीपेन्द्र राई मंसिर ९ । सिनामंगल ओह्रालो पुग्दा जाम सुरु भयो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घर जानेको सेवाका लागि सिनामंगल ओह्रालोदेखि कोटेश्वरसम्म बायाँपट्टि लामबद्ध राखिएका बसले छोटो दूरीका सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ जान अवरुद्ध गरेको थियो । कोटेश्वरबाट चाबहिल र चाबहिलबाट कोटेश्वरतर्फ जाने बस सहजै अघि बढ्न सकेका थिएनन् । यात्रु सबै हतारिएका थिए । बिहानको ५ः३० बजे कोटेश्वर पुग्नुपर...
यस्तो छ, स्वरसम्राट नारायणगोपालको मोटरसाइकल
काठमाडौं । स्वरसम्राट नारायण गोपालले चढेका मोटरसाइकल कस्तो होला ? एकपटक हेर्न पाए गति नै परिन्थ्यो कि भनेर सोच्नुभएको छ ? छ भने तपाईं इच्छा पूरा हुने भएको छ । स्वरसम्राट नाराणगोपालले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल उनकै निवासमा राखिएका छ । तसर्थ, तपाईंको इच्छा पूरा हुने भएको हो । नारायणगोपालले बाअम ६४८ नम्बरको होन्डा मोटरसाइकल प्रयोग गरेका थिए । मोटरसाइकल रातो रंगको भए पनि उनले सेतो रंगको हेल्मे...
दीपेन्द्र राई मुन्धुम अध्येता भोगीराज चाम्लिङ मतदान गर्न एभेन्जर मोटरसाइकलमै घर (हलेसी–तुवाचुङ नगरपालिका–५ खोटाङ) पुगे । मुन्धुम अध्येता चाम्लिङले मतदानमात्रै गरेनन्, घरमा रहँदा समाजसेवा गरे । उनले घरायसी कामसमेत गर्न भ्याए । घरबाट मोटरसाइकलमै घाँस राखेर बेंसी झारे । भैंसीलाई घाँस बोकेर बेंसी झरेका उनले बेंसीबाट बदाम, विकासी मेवा बोकेर घर ल्याए । कविचन्द्र राईले खिचेको तस्बिर ...
तेस्रो आँखा डटकम संरक्षकमा भूपेन्द्रकुमार राई